Baarlamaanka Turkiga Oo Ogolaaday in Ciidamo loo Diro Wadamada Ciraaq iyo Suuriya.
Sunday September 24, 2017 - 17:51:33 in Wararka by Super Admin
Kadib kulan adag oo ay magaalada Ankara ee wadanka Turkiga ay ku yeesheen xildhibaanada Baarlamaanka Turkiga ayay uga doodeen qodob murun badan dhaliyay oo ku aadanaa in Turkigu ciidamo dagaal udiro Ciraaq iyo Suuriya.
Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in dood dheer kadib ay xildhibaanadu si aqlabiyad leh isugu raaceen in ciidamo katirsan Melleteriga Turkiga loo diro wadamada Ciraaq iyo Suuriya.
Nin lagu magacaabo Nuuradiin oo ah wasiirka difaaca dowladda Turkiga ayaa warbaahinta u sheegay in qaraarka uu gaaray baarlamaanka uu ogolaanayo in ciidamo melleteri ah loo diro wadamada Ciraaq iyo Suuriya halkaas oo ay ku sugnaan karaan muddo sanad ah.
Wakaaladda wararka Anaadool oo soo xiganaysa saraakiil katirsan wasaaradda G/dhigga ayaa baahisay in melleteriga Turkiga ay qarka usaaranyihiin in ay weerar ku qaadaan waqooyiga Suuriya si ay ula dagaallamayaan maleeshiyaadka gooni ugoosadka Kurdiyiinta YPG iyo xoogag islaami ah.
Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa doonaysa in ay duullaan ku qaado waqooyiga wadanka Ciraaq haddii maamulka kajira magaalada Arbiil uu qaado anfti dadka Kurdiyiinta u ogolaanaysa in ay nodaan dowlad madax banaan.
Mascuud Barazaani oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ayaa sheegay in ay ka dhabayn doonaan wixii ay muddo nus qarni ah udagaalamayeen oo ah in mar uu ay noqdaan dowlad ka madax banaan Ciraaq inteeda kale.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in haddii Kurdistaan ay noqoto dowlad madax banaan caqabad dhanka siyaasadda iyo amniga ah usoo geli doonto dowladda dabadhilifka ah ee fadhigeedu yahay magaalada Ankara waxayna Turkigu wajahi doonaan loolan cusub oo uga yimaad Jabhadaha Kurdiyiinta.
Dhinaca kale dowladda shiicada iiraan ayaa ku dhawaaqday in ay xirtay cilaaqaadkii dhanka hawada ee kala dhaxaysay maamul goboleedka Kurdistaan ee waqooyiga Ciraaq si looga feejignaado fatqalado lafilayo in ay dhacaan aftida berri laga qaban doono waqooyiga Ciraaq.
iiraan waxay sheegtay in go’aankan ay qaadatay kadib dalab uga yimid xukuumadda shiicada ah ee fadhigeedu yahay magaalada Baqdaad taasi oo si aad ah ugasoo horjeedo aftida ay qaban qaabinayso.